Ciidamadii Madoobe oo Loo qeybiyay Hub Culus Duulaana ku ah… |
Ciidamadii Madoobe oo Loo qeybiyay Hub Culus Duulaana ku ah…
Warar hoose oo goor dhow naga soo gaaray Magaalada Kismaayo ee Xarunta gobalka Jubada Hoose, ayaa sheegaya in Maleeshiyaadka Raaskambooni gudaha Jaamacadda Kismaayo loogu qeybiyay Hub culus.
Maleeshiyaadka Hubka la siiyay ayaa la sheegayaa in dhawaan uu Tababar usoo idlaaday, waxa ayna duulaankooda ugu horeeye ku qaadi doonan Deegaanka Goobweyn oo ay ku dhuumaleysanayaan Ciidamo ka amar qaato Barre Hiiraale.
Qeybinta iyo hubeynta Maleeshiyaadka ayaa waxaa xaqiijiyay mid ka mid ah saraakiisha maamulka Axmed Madoobe oo sheegay in ciidamadaan ay gaari doonaan Deegaano ay ku sugan yihiin Ciidamada Barre Hiiraale iyo Alshabaab, waxa uuna Tilmaamay in Ujeedkooda uu yahay xaqiijinta Ammaanka Goobahaasi ka maqan Gacanta Axmed Madoobe.
Sidoo kale, Bulshada ku nool Deegaanka Goobweyn iyo Tuulooyin hoostaga ayaa iyagu aruursanaayo alaabtooda, kuwaasi oo ka baqanaayo inuu ku baaho weerarada ay damacsan yihiin Maleeshiyaadka Raaskambooni.
Dhanka kale, Magaalada Kismaayo, ayaa waxaa laga dareemayaa xaalad kacsan oo ka taagan Magaalada Kismaayo, waxa ayna wararku sheegayaan in Maleeshiyaadka Raaskambooni iyo gaadiidkooda lasoo dhoobay Laamiyada iyo wadooyinka waaweyn.